कास्की-२ मा बामदेव गौतम आए टन्टै साफ ! -
कास्की-२ मा बामदेव गौतम आए टन्टै साफ !
आशन्न उपनिर्वाचनले मुलुमा चुनावी रौनक बढेको छ । चुनावी प्रक्रिया शुरु भएसंगै मुलुकको ध्यान कास्की–२ मा छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका सबै नेताको भाषण र अभिव्यक्ति पनि कास्की २ मै केन्द्रित छ ।
यो क्षेत्र प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव हुने १ मात्र क्षेत्र हो । पूर्व पर्यटनमन्त्री एवं नेकपाका आशलाग्दा नेता स्व. रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्र भएकाले पनि विशेष चर्चामा छ । अब यो क्षेत्रमा उठ्ने सांसद को ? भन्ने विषयले यतिबेला विशेष चर्चा र परिचर्चा पाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जागरण अभियानमार्फत कास्की-२ मा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि कास्की कांग्रेसले पार्टीका उच्च तहका नेतालाई प्रतिनिधिको रुपमा खटाइसकेको छ । सत्तापक्ष नेकपाले भने उम्मेदवारको चर्चा बाहेक अन्य केही गरेको छैन ।
यहाँबाट जित्नेले सोझै संघीय संसदमा प्रवेश पाउने र राजनीतिक हैसियत पनि बढ्ने भएकाले पनि कास्की चर्चामा रहेको हो । त्यसैले केन्द्रीय तहका उच्च नेताको ध्यान यो क्षेत्रमा परेको हो ।
कास्की-२ मा विशेषगरि नेकपाका उपाध्यक्षको हैसियत सरहका नेता बामदेव गौतम र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङको बढी चर्चा छ । गौतम आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा पराजित भएका नेता हुन् । गुरुङले भने चुनाव लड्ने अवसर नै पाएनन् ।
यो क्षेत्रमा रवीन्द्र पत्नी विद्या भट्टराईकै चर्चामा पनि कम छैन । सक्रिय राजनीतिमा नभएता पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ताले नै विद्यालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । यसमा विद्याको धारणा र चाहना भने सार्वजनिक भएको छैन ।
यो क्षेत्रमा नेकपाबाट सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, तुलबहादुर गुरुङ, धनराज आचार्य, राजकाजी गुरुङ ‘करण’ श्रीनाथ बराल, शारदा सुवेदी, भीम कार्की, अखिल उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यलगायतको पनि चर्चा छ।
नेकपा कास्कीका विभिन्न नेताका खेमा सक्रिय भएकाले पनि कास्कीकै नेताहरूलाई केन्द्रीय नेता आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । एक नेता भन्छन्, ‘यो निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी बन्ने सम्भावना जति छ, राजनीतिमा स्थापित हुने अवस्था पनि उत्तिकै छ । त्यसैले कास्कीमै भएका नेताहरू बरु यहाँकाले नपाउन्, विद्या पनि नउठून् र आए बरु वामदेव नै आउन् भन्ने चाहन्छन्, किनकि वामदेव अर्को पटक यहीँबाट चुनाव लड्दैनन् ।’
त्यसैले कास्कीका सबै नेताले बामदेव नै आए वेश हुने ठानेका छन् । कास्कीका नेताहरू विद्याले इच्छा देखाए राष्ट्रियसभामा पठाउने र सो निर्वाचन क्षेत्र आफू अनुकूल प्रयोग गर्नुपर्ने रणनीतिमा छन् ।
यसअघिका चुनावमा पनि कास्की कांग्रेसले यस्तो समस्या भोग्दै आएको छ । अझ, अघिल्लो चुनावमा त यहाँका देखिने र मानिने कांग्रेसले नै रवीन्द्रलाई भोट दिएका थिए ।
अहिले कांग्रेसको डर भनेको अन्तरघात नहोस् भन्नेमै छ । पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन र पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न निर्देशन आएको छ ।
कास्की-२ मा साना पार्टीको पनि नजर परेको छ । संघीय समाजवादी फोरम, साझा पार्टी पनि यो क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने तरखरमा छन् ।
साझाले आउँदो शनिबार उम्मेदवार घोषणा गर्ने जनाएको छ । साझाबाट पहिला नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गरेकी रजनी केसीको उम्मेदवारी पर्ने देखिएको छ । उम्मेदवार हुनकै लागि उनले पोखरा विश्वविद्यालयको कर्मचारीबाट राजीनामा दिएको बताइन्छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्ने हो भने कास्कीका ३ वटै क्षेत्र नेकपाको लागि सहज छन् । उक्त चुनावमा रवीन्द्र अधिकारी ८ हजार ५ सय ४६ मत बढी ल्याएर विजयी भएका थिए ।
निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार रवीन्द्रले २७ हजार २ सय सात मत ल्याउँदा निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत ल्याएका थिए ।
अहिले सो निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार ६ सय १० जना मतदाता थप भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका अनुसार साउन १६ गतेसम्म उक्त संख्यामा मतदाता थप भएका हुन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभामा यो क्षेत्रमा कुल ७० हजार ६ सय ५१ जना मतदाता थिए । थपिएकासँगै उपनिर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट ७२ हजार २ सय ६१ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् ।